Chiratidzo chemhuka ina (1-8)
Kubuda kwenyanga diki inozvikudza (8)
Wemazuva Mazhinji anotungamirira dare (9-14)
Mwanakomana wemunhu anopiwa umambo (13, 14)
Dhanieri anoziviswa kududzirwa kwehope (15-28)
Mhuka ina dzinomiririra madzimambo mana (17)
Vatsvene vachagamuchira umambo (18)
Pachamuka nyanga gumi kana kuti madzimambo (24)
7 Mugore rekutanga raMambo Bheshazari+ weBhabhironi, Dhanieri akarota hope uye akaona zviratidzo akarara pamubhedha wake.+ Akabva anyora hope dzacho,+ achirondedzera zvinhu zvacho zvese. 2 Dhanieri akati: “Pazvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndakaona mhepo ina dzekudenga dzichinyandura gungwa guru.+ 3 Mhuka huru ina+ dzakabva dzabuda mugungwa racho, uye dzese dzakanga dzakasiyana. 4 “Yekutanga yakanga yakaita seshumba,+ uye yaiva nemapapiro egondo.+ Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mapapiro ayo adzurwa, ikasimudzwa panyika, ikamiswa nemakumbo maviri semunhu, ikapiwa mwoyo wemunhu. 5 “Uye ndakaona imwe mhuka yechipiri yakanga yakaita sebheya.+ Yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo, uye yakanga yakaruma mbabvu nhatu; uye yakaudzwa kuti, ‘Simuka, udye nyama zhinji.’+ 6 “Pashure pacho, ndakaramba ndakatarisa ndikaona imwe mhuka yakanga yakaita sembada,+ asi yakanga iine mapapiro mana pamusana akaita seeshiri. Mhuka yacho yaiva nemisoro mina,+ uye yakapiwa simba rekutonga. 7 “Pashure pacho, ndakaramba ndakatarisa zvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina. Mhuka yacho yaityisa uye yaivhundutsa uye yakanga yakasimba kwazvo, iine mazino mahombe esimbi. Yaiparadza, ichipwanya-pwanya, uye yakatsika-tsika zvakanga zvasara.+ Yakanga yakasiyana nedzimwe mhuka dzese dzakanga dzaitangira, uye yaiva nenyanga gumi. 8 Pandaifunga nezvenyanga dzacho, pakabva pabuda imwe nyanga diki pakati padzo,+ uye dzimwe nyanga nhatu dzekutanga dzakadzurwa pamberi payo. Nyanga yacho yaiva nemaziso akaita seemunhu, uye yaiva nemuromo waitaura uchizvikudza.+ 9 “Ndakaramba ndakatarisa kusvikira zvigaro zveumambo zvaiswa, Wemazuva Mazhinji+ achibva agara.+ Zvipfeko zvake zvakanga zvakachena sechando,+ uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semvere dzemakwai dzakachena. Chigaro chake cheumambo chaiva marimi emoto; mavhiri acho aiva moto unobvira.+ 10 Paiva nerukova rwemoto rwaiyerera ruchibva pamberi pake.+ Vane chiuru chakapetwa kane chiuru, vairamba vachimushumira, uye vane zviuru gumi zvakapetwa kane zviuru gumi vakanga vakamira pamberi pake.+ Dare+ rakatanga kutonga, mabhuku akavhurwa. 11 “Panguva iyoyo, mashoko ekuzvikudza+ andainzwa achitaurwa nenyanga yacho akaita kuti ndirambe ndakatarisa. Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mhuka yacho yaurayiwa, muviri wayo ukapiswa nemoto, ukaparadzwa. 12 Asi dzimwe mhuka dzese+ dzakatorerwa ushe hwadzo, uye upenyu hwadzo hwakawedzerwa nenguva imwe chete nemwaka. 13 “Ndakaramba ndakatarisa zvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe munhu akafanana nemwanakomana wemunhu+ achiuya aine makore ekudenga; akasvika kune Wemazuva Mazhinji,+ uye vakamuswededza pamberi pake. 14 Akapiwa ushe+ nekukudzwa,+ neumambo, kuti vanhu vemarudzi ese, nenyika, nemitauro yakasiyana-siyana vamushumire.+ Ushe hwake ushe hunogara nekusingaperi, husingazobviswi, uye umambo hwake hahuzoparadzwi.+ 15 “Zvino ini Dhanieri, ndakanetseka chaizvo nekuti zvandakaratidzwa zvakandityisa.+ 16 Ndakaenda pedyo nemumwe wevakanga vakamira ipapo, kuti ndimubvunze kuti zvinhu izvi zvairevei. Akabva apindura, akandiudza kuti zvinhu izvi zvairevei. 17 “‘Mhuka huru idzi ina,+ dzinomiririra madzimambo mana achamuka panyika.+ 18 Asi vatsvene vaIye Mukurusa+ vachagamuchira umambo,+ uye umambo hwacho huchava hwavo+ nekusingaperi, huchava hwavo nariini nariini.’ 19 “Ndakabva ndada kuziva nezvemhuka yechina, iyo yakanga yakasiyana nedzimwe dzese. Yaityisa kwazvo, iine mazino esimbi nenzara dzemhangura uye yaiparadza, ichipwanya-pwanya, uye ichitsika-tsika zvakanga zvasara.+ 20 Ndakadawo kuziva nezvenyanga gumi+ dzaiva mumusoro mayo, neimwe nyanga yakabuda ikaita kuti nyanga nhatu dziwire pasi,+ nyanga yaiva nemaziso nemuromo waitaura uchizvikudza, iyo yainge yakakura kupfuura dzimwe. 21 “Ndakaramba ndakatarisa nyanga iyoyo payairwa nevatsvene, ichivakunda,+ 22 kusvikira Wemazuva Mazhinji+ asvika, akapa mutongo waitsigira vatsvene vaIye Mukurusa,+ uye nguva yakasarudzwa yekuti vatsvene vapiwe umambo yakasvika.+ 23 “Iye akati: ‘Kana iri mhuka yechina, kune umambo hwechina huchavapo panyika. Huchange hwakasiyana nehumwe umambo hwese, uye huchaparadza nyika yese uye huchaitsika-tsika hwoipwanya-pwanya.+ 24 Kana dziri nyanga gumi, pachava nemadzimambo gumi achabuda muumambo ihwohwo; uye pachavazve nemumwe pashure pawo, uyo achange akasiyana neekutanga, uye achaninipisa madzimambo matatu.+ 25 Achataura mashoko ekushora Wekumusorosoro,+ uye acharamba achinetsa vatsvene vaIye Mukurusa. Achafunga nezvekuchinja nguva nemutemo, uye vachaiswa muruoko rwake kwenguva imwe chete, nedzimwe nguva, nehafu yenguva.*+ 26 Asi Dare rakatanga kutonga, vachibva vamutorera ushe hwake, kuti vamuparadze uye vamutsakatise.+ 27 “‘Zvino umambo neushe neukuru hweumambo hwaiva pasi pematenga ese zvakapiwa vatsvene vaIye Mukurusa.+ Umambo hwavo umambo hunogara nekusingaperi,+ uye humwe ushe hwese huchava pasi pavo huchivateerera.’ 28 “Pano ndipo panogumira nyaya yacho. Asi ini Dhanieri, ndakanetseka chaizvo nezvaiva mupfungwa dzangu, zvekuti chiso changu chakachinja; asi ndakachengeta nyaya yacho mumwoyo mangu.”